SOICARE dhoobada iyo alwaax adag oo udgoon udgoon udgoon udgoonka qoyaya saliida lagama maarmaanka ah, Shiinaha SOICARE dhoobada iyo qoryaha adag udugga udugga caraf udgoon waxay soosaaraysaa soosaarayaasha saliida leh ee muhiimka ah, shirkado, Warshad - Sunpai Industries Limited
SOICARE dhoobada iyo alwaax adag udugga udugga caraf udgoon humidifies diffuser saliid muhiim ah
Jeermiska jeermiska, Qurxinta
CAYMISKA ALIBABA, PAYONEE
· QORSHAHA MINIMALST EE QORAALKA DHAQANKA: SOICARE faafiyaha saliida lagama maarmaanka u ah iyo qoyaan waxaa loogu talagalay Danmark iyadoo la tixgelinayo dabeecadda iyo maskaxda Minimalist maskaxda ku haysa. Waxay ku timaaddaa dusha sare ee dhoobada deegaanka iyo cagaha adag. Waxay diyaar u tahay in si aan kala go 'lahayn loogu qaso qurxin kasta oo leh 3 ikhtiyaar oo midab leh.
· XULASHADA WAQTIGA MUTIPLE: SOICARE diffuser saliida lagama maarmaanka ah iyo qoyaan-qoraha waxaa loogu talagalay 4-INTERVAL TIMERS: 1hr, 3hrs, 6hrs, and Always ON. Nalalka tusiyaha saacadaha waxaa si xeeladeysan loogu talagalay in lagu saadaaliyo dusha miiska.
· MISKA DHEERAADKA AH: SOICARE faafiyaha saliida lagama maarmaanka ah iyo uumiga wuxuu la yimaadaa 180ml biyo kayd ah oo kuu ogolaanaya inaad ku raaxaysato udgoonka adigoon olol furan kujirin 2 HOOYOOYINKA MISKA: Habka joogtada ah wuxuu bixiyaa 10 saacadood oo udgoon daran, Qaab Dhexdhexaad ah ((30 sec ON, 30 sec OFF)) waxay bixisaa mudo 20 saacadood ah iyadoo udgoon fudud.
· TAILORED LIGHT S hurdo: SOICARE diffuser saliida lagama maarmaanka ah iyo qoyaan-yare ayaa ka dhigi doonta BEEPS. Waad dooran kartaa inaad ku isticmaasho LAYSKA DARAN. SOICARE faafiyaha saliida lagama maarmaanka ah ULTRA-QUIETLY, sidaa darteed si dhib yar ayaa loo ogaan karaa xitaa inta lagu jiro saacadaha saqda dhexe.
· SAHAL IN LA ISTICMAALO OO LA JOOGO: SOICARE diffuser saliida lagama maarmaanka ah iyo huurka ma aha oo kaliya gabi ahaanba BPA-BILAASH, laakiin sidoo kale waxaa loo farsameeyay inay isticmaasho saliidaha lagama maarmaanka ah si hufan. Dheeraad dheeri ah, 6FT POWER CORD ayaa ku filan inuu gaaro godka derbiga ee habboon. Tiknoolajiyada SMART AUTO SHUT-OFF waxay hubisaa badqabka ugu badan markasta oo biyuhu qallalaan.
Sii Joogta ah
SP-L30 400ml amazon hadhuudhka alwaax caan ah ultrasonic saliidaha udgoon ee udgoonka caraf udgoon